आफैँले बनाइरहेकाे “बम बिस्फाेट” हुँदा “दुई युवा गम्भीर घाइते”
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०४:४६
पर्वतको विहादी गाउँपालिका ६ शालिग्राम छापमा आफैँले बनाइरहेकाे बम बिस्फाेट हुँदा दुई युवा गम्भीर घाइते भएका छन् । यो समाचार उज्यालो अनलाईनमा सन्तोष थापाले लेख्नुभएको छ ।
आइतबार साँँझ जीआई पाइप र सलाईको सहायताबाट सकेट बम बनाइरहेको अवस्थामा बिस्फोट भएपछि २७ वर्षीय छविलाल घर्ती र १६ वर्षीय समिर राना घाइते भएका हुन् । उनीहरले आफ्नै घरमा बम बनाइरहेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस- सफलता के हो?
सामान्यतया मानिसहरुले धनसम्पति कमाउनु, नोकर चाकर राख्नु र अरुलाई आफ्नो पक्ष र वशमा राख्नुलाई सफलता ठान्दछन । तर सफलता यो भन्दा धेरै भिन्न कुरा हो । माथी इड्विन सी. ब्लिसले भनेझै सफलता भनेको लडाईमा विजय पाउनु मात्र होइन, सिङ्गो युद्ध जित्नु हो ।
यहाँ हामीलाई लडाई र युद्धमा के फरक छ भन्ने कुरामा अलमल नहोस भनेर यी दुई बीचको फरक छुट्याउन आवश्यक ठान्दछु ।
युद्ध भनेको दुई वा दुईभन्दा बढि विशाल मतभेदबीचको द्धन्द्ध हो । अर्थात दुई परस्पर विरोधी विचारबीचको टकराब हो भने लडाई भनेको यस्ता मतभेद र परस्पर विरोधी विचारबीच कुन सहि र गलत हो भनेर छुट्याउन गरिने ससाना घटनाक्रम हो । जुन निर्णायक हुदैन । जस्तो किः महाभारतको कथामा पाण्डव र कौरवबीचमा सत्य र असत्यबीचमा ठुलो युद्ध भयो ।
ऊनीहरुबीच धेरै मतभेदहरु थिए । दुवैले आफ्नो कुरा सत्य सावित गर्न धेरै वादबिवाद, लडाई र झगडा गरे । एक अर्काको खुब खण्डन गरे, विभिन्न हत्कण्ठाहरु अपनाए । लाखौ करोडौँ मारिए । यसरी कयौ पटकका तर्क बितर्क, बादविबाद, झगडा, लडाई र आन्दोलनले अन्तत द्धन्द्धको समाप्ति भयो । र समग्र युद्धको हार जीतको छिनोफानो भयो ।
यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने त्यो लामो र विशाल युद्धमा थुप्रै पटकका तर्क बितर्क, बादविबाद, झगडा, लडाई र आन्दोलनमा कौरवहरुले पनि जितेको थिए । पाण्डवहरुलाई बाच्न र टिक्न पनि धौ – धौ पारेका थिए । कौरबहरुले अब संसार हाम्रोमात्र हो भन्ठानेर विजय उत्सव मनाएका थिए ।
तर कौरबहरुले कयौ पटक जित्ता जित्तै पनि अन्ततः समग्र युद्ध ऊनीहरुले हारे र पाण्डबहरुले जिते । अनि कौरबहरुको अस्तित्व बिलाएर गयो र पाण्डबहरु आजसम्म पनि सत्यको जितको प्रतिक बनेर रहिरहेका छन ।
हो यो घटनाबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि लडाई भनेको एउटा अंश वा टुक्रा हो भने युद्ध भनेको पुर्ण भाग हो । भन्नुको मतलव के हो भने हामी मानिस पनि आफ्नो जीवनका स-साना प्राप्तिलाई नै सफलता ठान्छौ र त्यहि साना कुराको पछि लागिरहन्छौ । जस्तो कि हामीलाई जीवनमा पैसा कमाउनु , घर बनाउनु , जागिर खानु र मान्छेलाई आफ्नो पक्ष र वशमा पार्नुलाई नै
जीवनको सफलता ठान्छौ र त्यहि पाउनलाई जस्ता सुकै हर्कत पनि गर्छौ र साम, दाम, दण्डभेद सबै गरेर भए पनि त्यो कुरा पाउन मरिहत्ते गर्छौ । तर अन्ततः हामी ती सबै कुरा पाएर पनि चिन्तित हुन्छौ, दुःखि हुन्छौ, राति सुत्न सक्दैनौ, मन भतभति पोल्छ र सारा जिन्दगी बर्बाद बनाउछौ ।
हो हामीले जीवनमा पैसा कमाउनु , घर बनाउनु , जागिर खानु मात्र सफलता होइन । यी त जीवनका स-साना पाप्ति हुन । यसरी हामीले चाहे जस्ता धेरै प्राप्ति पाएर पनि हामी बास्तविक सफल हुन सक्दैनौ । किनकि माथि भनेझै सफलता भनेको लडाई जित्नु मात्र होइन युद्ध जित्नु हो ।
त्यसो भए के हो त सफलता ? अब हामी गम्भिरतापूर्वक मनन गरौ । माथिका सन्दर्भहरु नियालौ । जस्तो कि पाण्डबहरुले सारा सम्पति जुवाको नाममा गुमाउनु पर्यो, १२ बर्षसम्म बनवास र गुप्तबासको सामना गर्नु पर्यो । कहिले बिष त कहिले आगोको नियोजित सामना गर्नु पर्यो ।
यसरी सारा दुःख कष्ट र आपत्तिको बावजुत पनि थुप्रै पटक हार्दा हार्दै पनि समग्र युद्ध ऊनीहरुले नै जिते । हो यहि हो सफलता पनि । सफलता भनेको कुनै जादुगरि होइन । कुनै चिठ्ठा पर्नु पनि सफलता होइन, न त कुनै भाग्यकै उपज हो सफलता । बरु सफलता त निरन्तर गरिने सकारात्मक कामको परिणाम हो ।
जीवनमा सफलता हासिल गर्न गाह्रो पनि छैन र सजिलो पनि छैन । तपाई जीवनमा सफल बन्न चाहानुहुन्छ भने असल काम गर्दै जानुस । हरक्षण आफुलाई आफ्नो चेतनाले चलाउनुस । आफुमा बिस्वास र धैर्यता कायम राख्नुस । तपाई स्वतः सफल बन्नुहुनेछ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘ दुःख पछिको सुख राम्रो हुन्छ तर सुख पछिको दुःख राम्रो हुदैन ।
सफलता पनि यस्तै कुरा हो । लामो त्यागले तपाईलाई ठुलो सफलता दिलाउछ । तपाई साँचो रुपमा सफल हुन चाहिरहनु भएको छ तर तपाईको प्रयास असफल भयो भने चिन्ता नगर्नुहोस । किनकि तपाईलाई त्यहि असफलताले नै सफलता प्राप्त गर्न सिकाउँछ ।
तर वास्तबिक सफलताको वास्ता नगरि तपाई कुनै कुरा पाउनको वा जित्नको लागि गलत प्रयास गरिरहनु भएको छ र सबै कुरा तपाईले भने जस्तै भयो भने पनि तपाई अन्ततः असफल नै हुनुहुनेछ ।
तपाई पनि आफ्नो जीवनको आजै मूल्याङ्कन गर्नुहोस । तपाईका हर गतिबिधि र सारा प्रयासहरुले तपाईलाई सफल बनाउदै छ कि असफल ? थाहा पाउनुहोस । किनकि सफलता भनेको लडाई जित्नु मात्र होईन युद्ध जित्नु हो । तपाईलाई
लडाई जितेको भ्रमले युद्ध जितिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर कहिल्यै त्यस्तो हुदैन किनकि धेरै लडाई जितेर पनि युद्ध हार्न सकिन्छ तर युद्ध जितिने निश्चित छ भने लडाई हारेर पनि केहि हुदैन । त्यसैले युद्ध जितिने निश्चित हुने खालका प्रयास गर्नुहोस – सफलता तपाईकै हातमा हुनेछ ।